Skimlinks Data Provider Checklist - Asjụ Ajụjụ Ndị Kwesịrị Ekwesị | Martech Zone
Ruo oge na-adịbeghị anya, ndị na-ere ahịa dijitalụ na ndị ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-achọ ịme ihe ngosi mgbasa ozi zutere ya black igbe ndapụta data. Imirikiti abụghị ndị injinia ma ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị data, ha ga-enwerịrị okwukwe ma tụkwasị obi na nkwupụta onye na-eweta data gbasara ogo data, na-enyocha nsonaazụ mgbe emechara - na mgbe emechara zụrụ ya.
Mana gịnị ka ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọ na onye na-eweta data? Kedụ ka ha nwere ike isi chọpụta onye na-eweta ọrụ kacha azụrụ azịza ya? Lee ụfọdụ ajụjụ ịjụ:
Kedu ka esi chịkọta data?
Ọ bụ site na nyocha nke onye ọrụ ọ bụla, ka ọ bụ data sitere na ya, ebe a na-achọpụta ụkpụrụ omume na obere ndị ọrụ wee wepụta ya maka ndị ka ibu? Ọ bụrụ na etinyere data ahụ, izi ezi dabere na oke nke otu atụpụtara - yabụ ọ dị mkpa ịlele otu otu mgbe ị na-enyocha ndị na-eweta ha. Ma buru n'uche na ihe ọ sọrọ ha ha, data inferred na-agụnye ịda ada n'ụzọ ziri ezi mgbe ewepụtara. Echefula na mgbe ejiri usoro data mee ihe na ngalaba, amụma ga-adabere na amụma karịa ezigbo ozi. Ihe omimi a na - abawanye ohere na data agaghị eme.
Ọ bụ ezigbo echiche ịjụ ajụjụ ezi uche dị na ya nke na-enye gị ohere ịtụle ike data n'ofe olulu ahụ, na-ele anya gabiga ihe ngosipụta dị mfe iji mee ka azụmahịa, nsuso metadata na akara ndị ọzọ na-ebu amụma ịzụrụ ihe n'ụzọ ziri ezi. Skimlinks na - ejide ihe ngosi ijeri ihe ruru ijeri iri na ise site na ntanetị nke ngalaba nde 15 na ndị ahịa 1.5 kwa ụbọchị. Site na itinye nyocha igwe na nyocha na-eme ka ihe bara ụba na ngwa ahịa ha, Skimlinks ghọtara taxonomy na metadata nke nde 20,000 ndebanye aha na njikọ. Ha na-eji ozi a iji wuo ngalaba ndị na-atụgharị mgbanwe dị elu dabere na ngwaahịa na ụdị ndị ọrụ nwere ike ịzụta, na-enyere ngosipụta dị irè karị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na vidiyo.
Kedu ụdị data anakọtara?
Ọzọ na ndepụta bụ ịchọpụta ụdị data gbakọtara. Ngalaba nwere ike ịgụnye clicks, njikọ, metadata, ọdịnaya peeji, okwu ọchụchọ, ụdị na ngwaahịa, ozi ọnụahịa, omume azụmahịa, ụbọchị na oge. A na - achịkọta ọtụtụ ụdị data, ọtụtụ ụdị amụma ị ga - arụ ọrụ ga - arụ ọrụ, nke nwere ike meziwanye izi ezi. Ọ bụrụ na anakọtara ụdị data ole na ole - dịka ọmụmaatụ, naanị mmetụta ma ọ bụ pịa - a ga-enwe obere ozi enwere ike iji mee nyocha amụma ma ọ bụ mee ka profaịlụ onye ọrụ. Na nke a dịruru ná njọ, ihe ize ndụ bụ na a ga-emefe profaịlụ onye ọrụ gabigara ókè na-ezighi ezi.
Skimlinks na-anakọta ma na-enyocha data ma na-achọpụta usoro dị n'ofe ọtụtụ ndị na-ebipụta ya na ndị ahịa na-ebu amụma amụma omume zụrụ ezi. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịkọwapụta otu onye ọrụ na-eleta peeji 10 n'ofe weebụsaịtị dị iche iche dị ka usoro nke na-egosi mmasị na ịzụrụ na izu na-abịa. Onweghi onye nkwusa nwere ike weputa data Skimlinks na-enweta site na netwọk ya nke ngalaba 1.5, mana ozi ndị bipụtara bụ otu akụkụ nke data mgbaàmà. Skimlinks na-enyochakwa data sitere n'aka ndị ahịa 20,000 na netwọkụ ya, gụnyere ozi ọnụahịa, ọnụ ahịa ọnụ ahịa, na ịzụta akụkọ ihe mere eme.
N'ime ime nke a, Skimlinks jikọtara akara site na gburugburu ụlọ ahịa azụmaahịa.
Kedu ka data si kwado?
Ikike ọzọ dị oke mkpa ịchọ mgbe ị na-enyocha ndị na-enye data bụ ikike ịkwado amụma na omume. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eweta ọrụ ọ bụla na-ekwu na ngalaba ha ga-eme mgbanwe ga-ejide data azụmahịa iji kwado na nzụta ahụ na-ewere ọnọdụ. Enweghị data azụmahịa, ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta uru bara uru.
Skimlinks nwere mmemme mmemme nke ndị na-ege ntị na-enyere ndị mgbasa ozi aka ịdabere na ndị ọrụ dịka ebe ha nọ na usoro ịzụ ahịa. Amụma na-eji ihe omuma, ngwaahịa na ọnụahịa, ma ha na-akwado site na iji ozi azụmahịa. A na-enyocha ndị ọrụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha mere ihe a tụrụ anya ya, yana usoro mmụta igwe na-emepụta ngalaba ka a zụrụ azụ na-adabere na ozi a. Nke ahụ na-enyere ndị na-azụ ahịa aka izere ọnọdụ nke ha na-elekwasị anya ndị na-azụ ahịa bụ ndị nwere ike nyochala ngwaahịa ha na-agaghị akwụli ma ọ bụ na ha enweghị ezi nzube ịzụta. Nsonaazụ bụ arụmọrụ kacha mma.
Ndị na-ere ahịa dijitalụ na ụlọ ọrụ ndị na-etinye aka na mgbasa ozi mmemme ga-ahọrọ ndị na-eweta data ziri ezi iji bulie ọnụ ahịa ha kwa puku echiche (CPM) ma ọ bụ ụgwọ maka ọrụ ọ bụla (CPA). Ọnụ ọgụgụ uto na mgbasa ozi mmemme na mpaghara azụmaahịa na-azụ ahịa nwere ike ime ka o sie ike ịmata otu esi ahọrọ ezigbo onye na-eweta data. Mana site n'itinye ajụjụ atọ gbasara uche gị mgbe ị na-atụle atụmatụ bara uru nke onye na-eweta data, ndị na-ere ahịa dijitalụ na ụlọ ọrụ nwere ike mepee igbe ojii ma chọta ngwakọta data kwesịrị ekwesị.
Tags: pịa dataụgwọ kwa omumena-eri kwa echichecpacpmdataonye na-eweta dataogo datankwado datadata datametadatamgbasa ozi mmemmemmemme mmemmeskimlinks njikọdata azụmahịa
Aha ya bụ Alicia Navarro
Alicia Navarro bụ CEO na ngalaba-onye guzobere Skimlinks, Nchịkọta monetization ọdịnaya nke na-enyere weebụsaịtị aka ịkwụ ụgwọ maka ebumnuche zụtara emepụtara na ọdịnaya ha. Tupu ịmalite Skimlinks, ọ rụrụ ọrụ ihe karịrị afọ 10 na -emepụta ma na-ebupụta ngwa ekwentị na ịntanetị na Australia na UK. Kemgbe afọ 2007, Alicia emeela ụlọ ọrụ ihe karịrị ndị ọrụ 85 gafee ọfịs na London, San Francisco na New York City.